Wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda.
Wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda.
adminAug 23, 2020WARARKA0
Kooxda Barcelona ayaan doonaynin inay fasaxdo Lionel Messi iyadoo go’aanka mustaqbalka xiddigan ee CampNou uu ku dhow yahay inuu soo gabagaboobo.
Messi, oo 33 jir ah, ayaa lala xidhiidhinayaa inuu ka tagayo kooxda ka dhisan LaLiga ka dib koob la’aan kooxda ku dhacday xilli ciyaareedkii 2019-20.
Laakiin xiddigan ayaa laga yaabaa inuu kusii nagaado Barcelona.
Messi ayaa qandaraas kula jira kooxda Barcelona illaa iyo 2021-ka waxaana Sport ay soo warinaysaa inuu go’aan ka gaadhi doono mustaqbalkiisa maalmaha soo socda, iyadoo kooxda ay bilaabaneyso tababarka xilli-ciyaareedka 2020-21 30-ka bisha August.
Xiddigan 6-da jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ayaa sidoo kale dhibaato kala kulmaya inuu baxo madaama qandaraaskiisa lagu burburin karo €700million.
– Ciyaaryahanka kale ee lala xidhiidhinayay Barcelona waa Lautaro Martinez, xilli xiddiga Inter laga yaabo inuu tago kooxo kale. The Sun ayaa qortay in Martinez uu yahay bartilmaameedka koowaad ee Manchester City.
– Chelsea ayaa ku sii dhawaanaysa inay soo iibsato difaacyahano cusub. Kooxda Premier League ka dhisan ayaa ku dhow inay heshiis 50 milyan ginni ah la gaadho daafaca bidix ee kooxda Leicester City Ben Chilwell, sida laga soo xigtay The Athletic. Dhanka kale, Goal ayaa soo warineysa in Chelsea loogu soo bandhigay daafaca Paris Saint-Germain Thiago Silva heshiis xor ah.
– Wargayska Manchester Evening News ayaa sheegaya in weeraryahanka kooxda Lyon Moussa Dembele uu doonayo inuu ku soo biiro United iyadoo horay loola xidhiidhinayay.
– Isbeddello badan oo laga filayo Juventus. Fabrizio Romano ayaa ku waramaya in kooxda heysata horyaalka Serie A ay dooneyso inay joojiso qandaraasyada Gonzalo Higuain iyo Sami Khedira, oo labadoodaba sannad uga hadhay dhamaadka qandaraaskooda.
– Benjamin Pavard ayaa wacdaro ka dhigay Bayern Munich, taasoo keentay inuu xiiso ka helo waddankiisa. L’Equipe ayaa qortay in Paris Saint-Germain ay xiiseyneyso daafacan heerka caalami ee reeer France.
– Waxaa lala xidhiidhinayaa ka tagista Tottenham, Serge Aurier ayaa ku sii jeeda Italy. La Gazzetta dello Sport ayaa warinaysa in Milan ay doonayso daafaca dambeedka midig ee reer Ivory Coast.
Previous PostGudida Doorashooyinka Somaliland iyo Xisbiyada Oo Soo Saaray Wakhtiga iyo Jadwalka Doorashooyinka Baarlmaanka Iyo Deegaanku Ku Qabsoomayaan. Next PostSomali Finance Minister Abdirahman Beileh talks to TRT World about the coronavirus pandemic, security, and how prepared Somalia is to hold one-person, one-vote elections in February next year.